प्रचण्डकाे विज्ञप्ति नै सही हाे, विवाद अनावश्यक– लेखराज भट्ट, नेकपा स्थायी समिति सदस्य - Everest Dainik - News from Nepal
प्रचण्डकाे विज्ञप्ति नै सही हाे, विवाद अनावश्यक– लेखराज भट्ट, नेकपा स्थायी समिति सदस्य
काठमाडौं, माघ २४ । सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली नेता हुन् लेखराज भट्ट । उनलाई त्यागी नेता पनि भनिन्छ । तत्कालीन एमाओवादीभित्र निक्कै प्रभाव जमाएका नेता भट्ट नेकपाको स्थायी कमिटि सदस्य हुन् भने उनी नेकपाको पार्टी एकता कार्यदलका सदस्य पनि हुन् । पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलाको समर्थन गर्दै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । प्रस्तुत छ, यही विषयमा नेता भट्टसँग गरिएको कुराकानी-
भेनेजुएलाको राजनीतिले नेपालको राजनीतिलाई नै प्रभावित बनायो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि अरु देशले दुरुपयोग गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?
हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ की हुन्न ? यो गम्भीर कुरा हो । हामी पनि दुई वटा विशाल देशका बीचमा छौं । भोली कुनै पनि त्यस्तो परिस्थितीको सिर्जना भयो वा देशले हस्तक्षेप गर्यो भने कुनै पनि देशले आफ्नो सार्वभौममाथिको हस्तक्षेप सहन सक्दैन । भेनेजुएलामाथि अहिले भइरहेको हस्तक्षेप त्यो देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप हो । त्यही भएर अहिले पार्टीले जे धारणा अघि सारेको छ, त्यो अहिलेको अवस्थामा ठीक छ । र, सरकारले पनि त्यही अनुसार नेपालको आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाइसकेको छ । तर, यो विषयमा बोल्दा प्रतिपक्षलाई पनि राखेर छलफल गरेर एउटै धारणा बनाएर जानु पथ्र्यो । त्यो हुन सकेन । त्यही भएर पनि दुई प्रकारका धारणा गयो । त्यसलाई सच्याइनुपर्छ ।
विज्ञप्ती निकाल्दा हतार भयो कि भएन भन्ने कुरा समिक्षाको विषय हो । तर, उहाँले गरेको कुरा ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो । मुख्य कुरा कुनै पनि देशले अर्को देशको सार्वभौकितामाथि हस्तक्षेप गरिनु हुन्न भन्ने नै हो । विश्वमा थुप्रै साना मुलुकहरु छन्, जो सार्वभौम छन् । ठूला मुलुक त थोरै छन् । अझ शक्तिशाली भन्ने त औलामा गन्न सकिने छन् । त्यसकारण बलियाले सानालाई खान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ । हामी पनि सानो देश हौं । तर, हाम्रो आफ्नै अस्तित्व छ । सानो छौं भन्दैमा कसैसँग झुक्ने वा ठूलाले हामीलाई दबाउने भन्ने कुरै आउँदैन ।
याे पनि पढ्नुस सरकारले व्यवहारिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छः अध्यक्ष प्रचण्ड
चित्त नबुझ्नेका लागि अध्यक्ष ज्युले जारी गरेको विज्ञप्तीलाई राम्रो भन्ने कुरा त भएन । कतिपयले भेनेजुएलामाथिको बाह्य हस्तक्षेपको समर्थन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि चाहेका थिए होला । तर, त्यो हामीले त्यो मान्ने कुरा त भएन । मात्र टेवलमा बसेर परराष्ट्र नीति यो हो भनेर प्रष्ट्याउन नसकेको चाँही सत्य हो । हामीले कुनै पनि देशले अर्को देशको सार्वभौकितामाथि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने कुरामा एकमत हुनुपर्छ ।
याे पनि पढ्नुस अपराधीलाई कानुनी कार्वाही नगरी समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन– अध्यक्ष प्रचण्ड
विविध कारणले एकता भइनसकेको भए पनि सबै तहमा पार्टीका गतिविधिहरु भइरहेका छन् । केन्द्रमा सबै जनवर्गीय संगठन एकता भइनसक्दा केही अफ्ठ्यारा आएका छन् । तर, यसलाई चिरेर भए पनि पार्टी अघि बढिरहेको छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नेतृत्व तहले चाडोभन्दा चाडो एकता प्रक्रिया टुंग्याउन लागिरहेको छ । निशान न्युजबाट साभार
ट्याग्स: lekhraj bhatta, Prachand